थाहापाउनुस् के–के छन् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विशेषता ? - Arthikbazar.com
थाहापाउनुस् के–के छन् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विशेषता ?
२०७५ मंसिर ११
Arthikbazar.com – योगदानमा आधारित योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टसहित मन्त्रीहरु, सरकारी निकायका अधिकारीहरु, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागिता रहेको छ ।